sosegado : ပုံပြင်မဟုတ်တဲ့ ငါ့ရဲ့မှတ်စု (တတိယပိုင်း)
ပုံပြင်မဟုတ်တဲ့ ငါ့ရဲ့မှတ်စု (တတိယပိုင်း)
မန္တလေး ဆင်းမည့်ကား၊ အိမ်ထိလာကြိုသည်၊ လက်ဆောင်လာပေးတဲ့သူများသား၊ ကျမကိုမဟုတ်၊ ရဲလင်းအောင်ကိုဖြစ်သည်၊ သူ့စက်ပြင်ခတွေပေါ့၊ နန်းထွေးက ကျမကို ရှမ်းဝတ်စုံတစ်စုံ လက်ဆောင်ပေးသည်၊ ကျမစုထားသော ပန်းခြောက်တွေကို ပလပ်စတစ်အိတ်တွေနဲ့ သေချာ စုစည်းပေးလိုက်သည်၊ ရဲလင်းအောင်ကလည်း သူရလာသော ချယ်ရီပန်းတွေ ကျမကိုလာပေးသည်၊ ကျမဝမ်းသာလိုက်သည်ဖြစ်ခြင်း၊ ကျမတို့လင်မယား ဦးစိုင်းလှအေးနှင့် ဒေါ်ထွေးကို ကန်တော့ပြီး မန္တလေးကို ခရီးဆက်ခဲ့သည်၊ ကျမတို့ကို ဆုတွေပေးသည်၊ ရှမ်းလိုပေး၍ ကျမနားမလည်၊ ဗမာလိုပေးသော စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါပါစေ ကိုတော့သိလိုက်သည်။
မန္တလေးကို ညနေပိုင်းတွင်ရောက်သည်၊ မန္တလေးအဝင်တွင် ကျမ ကိုဇော်ဦးကို သတိရမိသည်၊
မန္တလေးဘယ်နားကပါလိမ့်၊ စကားပြောပုံနှင့် သူ့မျက်နှာကို ပြန်မြင်ယောင်လာသည်။
မန္တလေးတွင် မျက်ပါးရပ်အလွန် ဂရိတ်ဝေါ ဟော်တယ်တွင်တည်းဖြစ်သည်၊ ရောက်ရောက်ချင်းညမှာ၊ မန္တလေးမှဆွေမျိုးများက ထမင်းဖိတ်ကျွေးသည်၊ ဟော်တယ်ရောက်တော့ ကျမ မူးပြီးအံပါသည်၊ ခရီးပန်းလို့လား၊ စားတဲ့အစာတွေကြောင့်လား မသိ၊ ကျမ ရှမ်းပွဲရပ်က ဆေးခန်းတစ်ခုသွားပြပြီး အကြောဆေးတစ်လုံး ထိုးလိုက်ရပါသည်၊ အိပ်ဆေးလဲပေးလိုက်သောကြောင့်၊ ထိုညက မန္တလေးမှာ ကျမ နှစ်ချိုက်စွာ အိပ်ပျော်ခဲ့ပါသည်။
ကျမ ညကမူးသောကြောင့် ဘတ်စ်ကားနဲ့ ရန်ကုန်ပြန်မည့် အစီအစဉ်ဖျက်ကာ၊ လေယာဉ်ပျံ ဖြင့် ပြန်ရန်စီစဉ်လိုက်သည်၊ ငပိနံ့ ငါးခြာက်နံ့ တွေကြားမှာ ၂နာရီ နီးပါး ယူဘီ လေယာဉ်စီးကာ ကျမတို့ ပြန်ခဲ့ကြသည်၊ အတွေးများစွာဖြင့် မန္တလေးကို ကျမ ထားရစ်ခဲ့သည်။
ကျမတို့ ရန်ကုန် ကျမတိုက်ခန်းမှာပဲ နေဖြစ်သည်၊ ကျမ၏အစီအစဉ်ပင်ဖြစ်သည်၊ ကျမတိုက်ခန်းလေးသည် ကန်လမ်းတွင် ဖြစ်ပြီး အင်လျားကန်နှင့်နီးသည်၊ အခန်းနံရံများကို အစိမ်းရောင်သုတ်သည်၊ အိပ်ခန်းအပြင်ဘက် နံရံကိုမူ အစိမ်းရင့်ရောင်၊ အမိုးစီလင်ကို အပြာရောင် သုတ်ထားသည်။ အရောင်ရွေးချယ်မူနှင့် ပတ်သက်၍ ရဲလင်းအောင်က ကျမသဘောအတိုင်းဖြစ်စေသည်၊ ဧည့်ခန်းနှင့် တဆက်တည်း ဘုရားခန်း လုပ်ထားပြီး ဘုရားစင်ကို ကျမစိတ်ကြိုက်လုပ်ထားသည်။
ဒီတိုက်ခန်း ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းသည် ဖေဖေ ကျေးဇူးပင်ဖြစ်သည်၊ ကျမ အသက်ကြီးလာလေလေ အဖေကို ပိုနားလည်လာလေလေ၊ ဖေဖေသည် ရှေ့ရေးကိုကြိုမြင်သည့်အလား အိမ်အတွက် ကျမပို့ပေးသော ငွေများမှ ဒီတိုက်ခန်းလေးကို ဖြစ်အောင်ဝယ်ခဲ့သည်၊ ဒီတိုက်ခန်းလေးကို ကျမသွေးဖြင့် မရင်းရပေမဲ့၊ ကျမ၏ ချွေးနဲ့ ရင်းခဲ့ရသည်၊ ကျမ၏ အိပ်ချိန်၊ နားချိန်တွေနဲ့ ဖြစ်ခဲ့သည်၊ နောက်ဆုံး ကျမ မျက်ရည်တွေ ပေးဆပ်ခဲ့ရသည်၊ ကျမက မျက်ရည်တိုက်ခန်းလေးဟု အမည်ပေးထားသည်။
ကျမသန်လျင်အိမ်တွင် သိပ်သပ်သပ်ရပ်ရပ် မနေခဲ့သော်လည်း ကျမ၏တိုက်ခန်းကို အမြဲသပ်ရပ်စွာနှင့် အားလုံးအစီအစဉ် တကျ ဖြစ်စေသည်၊ စာအုပ်၊ ဂျာနယ်၊ သတင်းစာတို့ သူ့နေရာနှင့်သူ၊ စာကြည့်စားပွဲသည်၎င်း၊ ဧည့်စားပွဲသည်၎င်း၊ အမြဲရှင်းလင်းသပ်ရပ်နေရမည်၊ ဘုရားပန်းတို့ ဘယ်တော့မှ မညိုးရ၊ ထမင်းစား စားပွဲပေါ်တွင် စားကြွင်းကျန်များ တစ်ဝက်လက်ကျန်များ မရှိစေရ၊ ပန်းကန်များ အားလုံးဆေးပြီးမှောက်ထားမှကြိုက်သည်၊ ထိုကြောင့် ကျမတိုက်ခန်းလေးသည် အမြဲ ပြောင်ရှင်းနေသည်၊ ကျမအားနေသည့်အချိန် အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်၊ ပန်းကန်တွေကို ဆေးပြီးရင်းဆေးနေတော့သည်၊
‘ရဲလင်း ဂျာနယ်တွေကို ဘာလို့ စားပွဲပေါ်မှာ ပစ်ထားတာလဲ၊’
‘ပစ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး၊ တင်ထားတာ ဖတ်လို့ မပြီးသေးဘူး၊’
‘ဟာ အောက်ထဲထည့်ထား ဖတ်တော့မှ ပြန်ထုတ်၊’
ကျမတို့အိမ်၏ နေ့တိုင်းကြားနေရသော စကားများပင်။
ကျမတို့အိမ်ကို ကျမနှင့် ရဲလင်း သူငယ်ချင်းများ၊ မိဘ ဆွေမျိုးများလာလည်သည်၊ ကျမ သူတို့ ပြောနေတာကို တစ်ခါတစ်လေ ဘာမှမသိလိုက်၊ ကျမအိမ် ဘာဖွသွားမလဲ လိုက်ကြည့်နေမိသည်၊ သူတို့ပြန်သွားလျှင် ကျမနှင့် ရဲလင်းအောင်တို့ စကားများကြသည်၊
‘အိမ်ကို ဘယ်သူမှ မလာရင်ကောင်းတယ်၊’
ကျမက ‘ငါလဲ အဲဒါပဲကြိုက်တယ်၊’
ကျမ သန်လျင်အိမ် သွားဖြစ်သည်မှလွဲ၍၊ ဘယ်သူ့ အိမ်မှ မလည်ဖြစ်ချေ။
အစ်မဝမ်းကွဲ မရီခိုင်မှတဆင့် ဟိုနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ခဲ့သည့်ကိစ္စ ကျမ မိဘများသိရှိသွားသည်၊ ဖေဖေသည် ယူကျုံးမရဆုံးဖြစ်လေသည်၊ ရဲလင်းအောင်နှင့် ကျမ မိဘတွေကြား အမြင်သိတ်မကြည်လင်တော့။
ညည အိပ်မပျော်ခြင်းကို ကျမစွဲလို့နေပြီ၊ ၊ ကျမ စာတွေပိုဖတ်ဖြစ်လာသည်၊ ကျမ အိပ်သောအချိန်တွင် ရဲလင်းအောင် အိပ်ကောင်းနေပြီ၊ ရဲလင်းအောင် ထသောအချိန် ကျမ အိပ်ကောင်းနေပြီ။ အိပ်ဆေးများသည် ကျမအတွက် အသုံးမဝင်တော့ပါ။ ထိုအတူ ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဝေဒနာကို တစ်ခါတစ်လေ ကျမခံစားရသည်၊ ရဲလင်းအောင်အကြံပေး၍ ကျမ အင်္ဂလိပ်စာပေ သင်တန်းကို သံရုံးတစ်ခုတွင်တက်ဖြစ်သည်၊ ညည အိပ်မပျော်ခြင်း နည်းနည်းတော့လျှော့လာသည်၊ ကြည်အေး ဝထ္ထုထဲကလို ‘ညကြီးမင်းကြီးထပြီးထိုင်နေ’ ကျမညလူဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ခါတစ်လေ မနက်မနက် အလုပ်သွားခါနီးတိုင်း ကျမရဲ့နဖူး သို့မဟုတ် ပါးကို ရဲလင်းအောင် နမ်းသွားတတ်သည်၊ ညည အိပ်နေသော ရဲလင်းအောင်ကိုကြည့်ပြီး ကျမစိတ်ထဲမှာ ငါကို အလိုလိုက်သားပဲ၊ နင်ကိုငါ့ချစ်ပါတယ် ရဲလင်းရယ် ပြောနေမိသည်။
တစ်ခါတစ်လေ နံနက် ၂ နာရီ ၃ နာရီလောက် ကျမ ဟင်းတွေချက်၊ ခေါက်ဆွဲတွေကြော်၊ မနက် ရဲလင်းအောင် စားရန်ဖြစ်သည်၊ သုံးလေးမျိုးလောက် ချက်ဖြစ်သော နေ့များတွင် ရဲလင်းအောင် ညည်းသည်၊ ကျမကလည်း နင်စားစေချင်လို့ပါ ဆိုရင် ဘာမျှမပြောတော့ပါ။
ခေါင်းတအားကိုက်၍ ဆရာဝန်သွားပြရာမှ ကျမတွင် ကိုယ်ဝန်နှစ်လ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်၊ ကျမဘယ်လိုမှမနေ လင်ယူရင်သားမွေးရမည်မဟုတ်ပါလား၊ ရဲလင်းအောင်နှင့် သူ့မိသားစုကတော့ တအားပျော်ကြသည်၊ ကျမမိဘတွေကတော့ ကျမကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်သည်၊ အမေ နှင့် မောင်လေး ကျမဆီတစ်ပတ်တစ်ခါ လာတော့သည်၊ ရဲလင်းအောင်က ကျမကိုယ်ဝန်ကို ပါမောက္ခ ဆရာဝန်မကြီးထံတွင် အပ်သည်၊ ဒီလိုနှင့်ကျမ အပြုစုခံဖြစ်နေရသည်၊ ညများမှာတော့ ကျမရင်သွေးလေးအတွက် စိတ်ကူးယဉ်မိသည်။
ဆေးခန်းသွားတိုင်း၊ ပါမောက္ခ ဆရာဝန်မကြီးက၊
လာသမီးဘယ်လိုနေသလဲ၊ ဆရာမကြီး ခလေးမလေးကို သေချာစစ်ပေးလိုက်၊
တို့ ဘယ်သူ့အိမ်ကခေါ်ထားလို့ သွားလိုက်ဦးမယ်၊
ကျမကို ကိုင်တောင်မကြည့်၊ ဒီလိုနဲ့ ဆရာမကြီးနဲ့ပင် ရက်ချိန်းတွေ ပြီးခဲ့ရသည်၊
အဲလိုဆိုလဲ အဲဒီ့လူတန်းစားတွေပဲ ကုသည် ဟုရေးထားပါလားလို့၊ ကျမ ရဲလင်းအောင် ကိုတောင်ပြောမိသည်။
ကျမကိုယ်ကျမ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မတူ၊ သာမန်ဖြစ်နေသည်၊ Morning sickness လဲသိပ်မဖြစ်၊ တစ်ခါတစ်လေ နောက်ကျောဘက်နာ၍ ဆီးခဏခဏသွားသည်၊ ဓမ္မတာတောင်ပြန်လာသလိုလို။ ပါမောက္ခ ဆရာဝန်မကြီးက နောက်တပတ် ultrasound ရိုက်မည်တဲ့။
အမေ နှင့် မောင်လေး ဒီနေ့မနက် ရောက်လာသည်၊ မနေ့ညကကျမ ဖျားသည်၊ ဆေးခန်းသွားပြရမည် ဟုဆိုသည်၊ ဆေးခန်းသွားရန် ရဲလင်းအောင် အလာကိုစောင့်နေကြသည်။ ကျမ ဗိုက်နာလာသည်၊ ဗိုက်နာတာပိုဆိုးလာကည်၊ ကျမခံနိုင်ရည်မရှိတော့၊
အမေ နှင့် မောင်လေး အောက်ထပ် အကူအညီနှင့် ကျမကို ဆေးရုံပို့ကြသည်၊
နာကျင်မူ့၏ ဝေဒနာကြောင့် ကျမလောကကြီးနှင့် ခေတ္တ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားသည်။
ကျမ ပြန်သတိရလာတာပဲဖြစ်မည်၊ အဖြူရောင် အမိုးစီလင်ကိုမြင်နေရသည်၊ စကားပြောသံအချို့ ကြားနေရသည်၊
ERPC ၊ Unusual ၊ ၁၆ ပတ်ကျော်ပြီ၊ Gestation ၊ IUFT ၊ ပါမောက္ခ ဆိုတဲ့ဂုဏ် နှင့် လူကိုလေးစားလို့အပ်လိုက်တာ ဘာတွေမှန်းမသိ မသဲကွဲ၊ တဖြေးဖြေး စကားသံတွေ သဲကွဲလာသည်၊
‘ပါမောက္ခ တစ်ယောက်လုံးလုပ်နေပြီး Symptoms ကိုမသိဘူးလား၊ ကျနော်တော့ ဖိဘက်လုပ်မယ် အစ်မကြီး’ အမျိုးသား အသံ၊
သူက မိခင်စောင့်ရှောက်ရေး နှင့် အချိန်ကုန်နေတာ၊ နင့် ဖိဘက် ဘာအရာရောက်မှာလဲ၊’ ‘မိခင်စောင့်ရှောက်ရေး ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ နင်သိသားနဲ့၊’ အမျိုးသမီးအသံ၊
‘လူနာက တော်တော်ခံလိုက်ရမှာ၊’ ယောက်ျားအသံ၊
‘သမီးလေးကို ကြည့်ပေးကြပါဦး၊’ ကျမ ယောက္ခမကြီး၏အသံ ကြားလိုက်ရသည်၊
ဆရာဝန်ဟုထင်ရသော အမျိုးသား တစ်ယောက်ဝင်လာသည်၊
ယောက္ခမကြီးက ‘ဟေ့ သား၊ သမီးအမေတွေကို ခေါ်လာခဲ့၊’
‘ခဏ နေကြပါဦးရှင်၊ ကျမတို့ လူနာကို အရင်စစ်ပါရစေ၊ ပြီးရင်ခေါ်လိုက်ပါမယ်’။
ကျမ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျသွားခဲ့ပါသည်၊ သားအိမ်ခြစ် လိုအပ်တာတွေလုပ်ရင်း၊ ဆေးရုံတွင် တစ်ပတ်နေလိုက်ရပါသည်။
ဆေးရုံဆင်းသည့်နေ့တွင် တာဝန်ကျ သမားတော်ကြီးက ကျမတို့ကိုခေါ်တွေ့သည်၊ နောက်ထပ်ကိုယ်ဝန်ယူဘို့ တစ်နှစ်လောက်စောင့်ရန်၊ အအိပ်အစားမှန်ရန်၊ ပျော်ပျော်နေရန်၊ အသေးအဖွဲလေးကအစ မိမိဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ရန်၊ နောက်ဆုံး ရဲလင်းအောင်ကို ကျမကို ပိုမိုဂရုစိုက်ရန် မှာကြားလိုက်သည်။
နှစ်သိမ့်စကားတွေ ကြားမှာ ကျမဘယ်လိုခံစားရမှန်းမသိ၊ ဝမ်နည်းနေသည်တော့မှန်သည်၊ သြော် ငါ မိခင်မဖြစ်ထိုက်သေးလို့၊ ဒီရင်သွေးလေးကငါကို အမေလို့မခေါ်ချင်လို့ နေမှာ၊ ငါတို့နှင့် မနေချင်လို့နေမှာ ဟုတွေးမိသည်။ ရဲလင်းအောင်က ငါနင့်ကို ပိုဂရုစိုက်ပါမယ်၊ ပျော်အောင်နေ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ စိတ်ကူးထဲတောင် မထည့်နဲ့၊ နောက်တစ်ခါအတွက် ငါတို့ပြင်ဆင်ရအောင်ပေါ့။
တစ်လအတွင်းမှာ ကျမစိတ်တွေ ဘယ်လိုဖြစ်လာသည်မသိ၊သန့်ရှင်းမူ့ ကို ကျမပိုခင်တွယ်လာသည်၊ လက်ခဏခဏ ဆေးမိသည်၊ အပြင်ထွက်ခါနီး၊ အပြင်ကပြန်လာရင် ကျမရေချိုးမှ၊ မချိုးပါက ကျမကိုယ်ကျမ မသန့်ရှင်းဟုခံစားရသည်။
ပိုဆိုးသည်က ကျမနှင့် ရဲလင်းအောင်ကြားမှာ ကျမဘက်က ဘာဖြစ်လာမှန်းမသိ၊ ရဲလင်းအောင် မျက်လုံးကို ကျမ မကြည့်ချင် မျက်လုံးချင်းမဆုံအောင် ကြိုးစားသည်၊ စကားပြောလျှင် မျက်နှာကို လွှဲထားသည်၊ စကားသံတွေကို တခြားသို့ ပို့ ပစ်သည်၊ ရဲလင်းအောင်ရဲ့ စကားပြောသံကြားရင် ကျမ အလိုလို ဒေါသထွက်လာသည်၊ သူ့ ကိုယ်နံ့ကိုကျမ မခံနိုင်တော့၊ ညညအိပ်မပျော်ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ကျမ တခြားအခန်းသို့ ပြောင်းအိပ်လိုက်သည်။
ဘုရားရှိခိုးချိန်မှ လွဲ၍ ကျမ အခန်းထဲမှာပဲနေသည် စာဖတ်နေသည်ကများသည်၊ ရဲလင်းအောင်ကလည်း ဧည့်ခန်းမှာအနေများသည် သီချင်းနားထောင် နေတာများသည်၊ ဖွင့်မပြောပဲ ကျမက စည်းခြားထားခြင်းဖြစ်သည်၊
သူ ဘာလုပ်လုပ် ကျမအမြင်မကြည်တော့၊ ကျမကို အဆိုးလုပ်နေသည်ဟုထင်သည်၊ သူဖွင့်သည်သီချင်းများသည် ကျမကိုတိုက်ခိုက်နေသည်ဟုထင်မိနေသည်၊ သူကြိုက်သည့်အဆိုတော်များကလည်းကြည့်ဦး လေးဖြူ ၊ မျိုးကြီး၊ ဇော်ဝင်းထွဋ်၊
ကျမကလဲ ကျမအတွေးနဲ့ကျမ ခင်မောင်တိုး၊ စိုင်းထီးဆိုင်၊ ထူးအိမ်သင် တို့ကိုကြိုက်သည်၊
ဒါငါ့ကို စောင်းဆိုနေတာ၊ ကျမလည်း အခန်းထဲကနေ ထူးအိမ်သင်သီချင်းတွေ ကျယ်လောင်စွာဖွင့်လိုက်သည်၊ အပြင်ဘက်က အသံတိတ် သွားသည့်အထိ၊ မယုံမရှိနဲ့ကျမ စစ်ချီသီချင်းခွေတောင် ဝယ်ထားသေးသည်၊ အပြိုင်ဖွင့်ရန်။
ရုံးပိတ်ရက်တစ်ရက်မှာ၊ ကျမဘယ်လိုမှ သည်းမခံနိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်၊ မနေ့ က သူ့သူငယ်ချင်းတွေလာသည်၊ ကျမ မရှိဘူးအထင်နဲ့ကျမအကြောင်းပြောကြသည်၊ တကောင်က မင်းမိန်းမ စိတ္တဇတဲ့၊ နေမြင့်အောင်မထားနဲ့ဆိုလား၊ ရဲလင်းအောင်က ဘာမှပြန်မပြောတော့၊ ချစ်ဒုက္ခ ကြီးဖြစ်နေပြီ၊ ကျမကိုထားခဲ့ပြီး စင်္ကာပူ သွားရန်တိုက်တွန်းကြသည်၊ ဘာဆက်ပြောမလဲ နားထောင်ရင်း ကျမအိပ်ပျော်သွားသည်၊ ညကထမသောင်းကျန်းလိုက်ရ။
မိုးလင်းတော့ ကျမ မီးစ ရသွားသည်၊ ဒီနေ့မှ အသစ်လဲမယ်ဟုထားထားသော ဘုရားပန်းများကို ရဲလင်းအောင် မနက်စောစောစီးစီး စွန့်လိုက်သည်၊ ကျမထလာတော့ သီချင်းနားထောင် နေသည်၊ သီချင်းကလည်း မျိုးကြီး ဘာတွေအော်နေမှန်းမသိ၊
‘ရဲလင်းအောင် နင်ငါ့ဘုရားပန်းတွေကို ဘာလုပ်လိုက်သလဲ၊’
‘ငါ့ပန်းတွေကို မထိနဲ့ လို့ နင့်ကိုငါပြောထားတာ၊’
‘ဒီလောက်တောင် နွမ်းနေတာ၊ ကူညီတာဟ၊’
‘ကူညီစရာမလိုဘူး၊ ထိစရာကိုမလိုဘူး၊’ ‘နင့်သီချင်းပိတ်လိုက်၊’ ကျမအသံမြင့်လိုက်သည်၊
‘ဟာ ဒါငါကြိုက်လို့ဖွင့်ထားတာ၊နင့်ဟာနင့် အခန်းထဲဝင်နေ’ ကျမကိုအော်ပြောလိုက်သည်၊
“ရဲလင်းအောင် နင့်ငါကိုဘယ်နှစ်ခါအော်ပြောဘူးလို့လဲ၊” “သေနာကောင်၊” ကျမပြန်အော်လိုက်သည်၊
‘မနေ့က သေနာတွေ မြှောက်ပေးတာနဲ့ နင်ကဲတာပေါ့လေ၊ အဲဒီသေနာတွေ ဘယ်တော့မှ မလာစေနဲ့ ၊’
‘လူဆိုတာ အပေါင်းအသင်းနဲ့နေရတာကွ၊ ဘယ်သူမှ ငါ့ကိုမြှောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူး၊’ ကျမကို ပြန်အော်သည်၊
“အော်အော် မျိုးကြီးနဲ့ အပြိုင်အော်၊” ကျမ HiFi ကို အသံကုန်သွားမြင့်လိုက်သည်၊
‘ဂလွမ်း၊ ဒိုင်း၊’ “အော်အော် မျိုးကြီးနဲ့ အပြိုင်အော်၊”
ကျမ ပန်းအိုးကိုခွဲပစ်လိုက်သည်၊ စာအုတ်စင်ကို ကန်ပစ်လိုက်သည်၊
‘သွားငါဆီမှာ မနေနဲ့ ၊’ ‘သွား၊’
‘စိတ်ကူးထဲမှာတောင် ငါကို မအော်နဲ့ ၊’
‘ဂျိန်း’ အခန်းတံခါးကိုပိတ်၊ အထဲကသော့ခပ်ကာ ကျမငိုပစ်လိုက်သည်။ အပြင်မှာ ဆူညံသံများကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
တစ်နာရီလောက်နေတော့ ရဲလင်းအောင်သော့ဖွင့်ပြီး အခန်းထဲဝင်လာသည်၊ ကုတင်ခြေရင်းတွင် ခွေခွေလေးအိပ်နေသော ကျမကို၊ ကုတင်ပေါ်ချီပွေ့တင်ရင်း၊ ငါလဲအလုပ်ထဲမှာ အဆင်မပြေဖြစ်လာလို့ပါ၊
ဆယ်မိနစ်လောက် ကျမကိုချော့သည်၊ ပြီးနောက် အေးအေးဆေးဆေးဆက်အိပ်တော့ ဟုဆိုကာ အခန်းပြင်ပြန်ထွက်သွားသည်။
နောက်နေ့အိမ်အောက်ဆင်းတော့၊ အောက်ထပ်က ကလေးလေး ဘောလုံးကစားနေရာမှ သူ့ ဘောလုံး
ကျမ ကိုလာထိသည်၊ ကလေးလေး အလန့်တကြား ကျမကိုကြည့်ပြီး ‘ထိမိသွားတာပါ၊’ ‘မတော်တဆပါ၊’ ‘ကျနော် အော်တာမဟုတ်ဘူး၊’ ‘ကျနော် မျိုးကြီးလဲ မဟုတ်ဘူး၊’ ကလေးကို ဒီအတိုင်းကြည့်ပြီး ဘောလုံးကို ပြန်ပေးလိုက်သည်၊ မုန့်ဆိုင်က အဒေါ်ကြီးတွေကလဲ ကျမကို တမျိုးကြီး ကြည့်နေကြသည်၊ သူတို့ပြောသလို ငါတကယ်ပဲ တခုခု ဖြစ်နေသလား။
အဲဒီနေ့က သန်လျင်ပြန်ပြီး အမေ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ကျမငိုပစ်လိုက်သည်၊ အမေကတော့ နားလည်နှစ်သိမ့်သည်၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အမေတွေဟာ သမီးတွေကို နားအလည်ဆုံးဆိုတာ၊ ညနေကြ ရဲလင်းအောင်လာခေါ်သည်၊ အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောရအောင် ကျိုက်ခေါက်ဘုရားပေါ်တက်ခဲ့ပါသည်၊ ဒီတစ်ခါတော့ လင်မယား ဘဝပေါ့။
မိဘ မေတ္တာ ဟာ တကယ်ကို အေးမြစေခဲ့ပါတယ်၊ ကျမ ငိုချင်သမျှကို အမေ့ဆီမှာ သွားငိုလိုက်ခြင်းသည် ကျမ အတွက် အနည်းငယ်တော့ ပေါ့ပါးသွားသည်၊ မေမေ၏ နှစ်သိမ့်စကားများသည် ကျမရင်ကို တစ်ချို့တစ်ဝက် ငြိမ်းအေးစေခဲ့သည်။
ကျမစဉ်းစားမိသည်၊ ငါဘာတွေလုပ်နေတာလဲ၊ ရဲလင်းအောင်က ငါ့ယောက်ျားပဲ၊ သူလဲခံစားချက်ရှိမှာပေါ့၊ ကျမ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဝမ်းနည်းမိသည်၊ တစ်နှစ်တာ ကျော်သွားသည်၊ ရဲလင်းအောင်ကို ငါဘာပျော်ရွှင်မူတွေ ပေးခဲ့လဲ၊ သူလိုအပ်တာ ဖြည့်စွမ်းပေးခဲ့လို့လား၊ တစ်ခုခုလုပ်သင့်တာပေါ့။
ဘုရားဖူးပြီးနောက် စောင်းတန်းက ထိုင်ခုံတွင် ရဲလင်းအောင်ကို ထိုင်စေ၍ ကျမကန်တော့လိုက်သည်၊ ပြစ်မှားခဲ့သည် အားလုံးကိုကန်တော့ခြင်းဖြင့် ခွင့်လွတ်ဘို့ ကျမပြောလိုက်သည်၊
ရဲလင်းအောင်က ကျမကို နှစ်သိမ့်သည်၊
‘ငါစိတ်ထဲ မထားပါဘူး မ ရယ်၊’
ရဲလင်းအောင်က သူ့ အလုပ်တွင် အဆင်မပြေတော့၊ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင် အပြောင်းအလဲက သူတို့ကုမ္မဏီကို ထိခိုက်စေခဲ့သည်၊ လုပ်ငန်းတော်တော်များများသည် အကြီးပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည် မဟုတ်ပါလား၊ စကာင်္ပူက သူ့ သူငယ်ချင်းများက ထွက်ခဲ့ရန်၊ အလုပ်ရှာပေးမည်၊ ဒီအတွက် သူစဉ်းစားရကျပ်နေကြောင်း ရှင်းပြသည်။
‘ငါ နင်ကိုပြောမလို့ ပဲ မ၊ နင့် မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး အချိန်ကိုစောင့်နေတာ၊’
‘ငါကလည်း လွန်ပါတယ် ရဲလင်း၊ ကိုယ်ဟာကို ရှုပ်နေတာ၊’
‘နင်ကို ငါကပြန်ခေါ်ထားပြီး၊ ခုငါက သွားဘို့ ပြောတာ၊ ငါ မတရားဘူးဖြစ်နေတယ်၊ မဟုတ်လား၊’
ကျမက ‘အေးလေ၊ နိုင်ငံခြားအလုပ်ထွက်လုပ်ဘို့ က ငါတို့ ရဲ့ ထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲ၊ မဟုတ်လား၊ စင်္ကာပူက
ငါတို့ မြန်မာတွေကို အခြေအနေနှင့် လက်ခံထားတာ၊ ငါ ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံ ဘေးပတ်ဝန်းကျင် တွေနဲ့ ကြည့်ရင် အများကြီးသာပါတယ်၊ စကာင်္ပူဟာနင့်ရဲ့ခြေတစ်လှမ်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာမယ်၊ တိုးတက်မူ့ကို ရှာရမှာပေါ့၊
နင်တကယ်လုပ်ချင် ကြိုးစားချင်တာကို ငါဝမ်းသာပါတယ်၊ ငါကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာထားခဲ့ပါ၊ ဖေဖေမေမေတို့လည်း ရှိတယ်လေ၊’
‘အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့နှစ်ယောက်အတူတူ သွားကြမှာ၊ နင်ကိုငါ မထားခဲ့နိုင်ပါဘူး၊’
‘နင့်ကို မပြောရသေးတာ၊ နင့်အိမ်ကို ငါပြောပြီးပြီ၊’
‘ငါ နိုင်ငံခြားကို ထပ်မသွားချင်တော့ဘူး ရဲလင်း၊’
ရဲလင်းအောင်က ‘နင်သေချာ စဉ်းစားပါ၊ စင်္ကာပူဟာ နင်ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံနှင့်မတူဘူး၊ ငါလဲပါတာပဲ၊ နင်ပြောသလိုပေါ့ တိုးတက်မူ့အတွက် အဲဒီမှာ အသစ်ပြန်စရအောင်၊’
ကျမပြန်ဖြေမိတာတော့ ‘ငါ မသွားချင်တော့ဘူး ရဲလင်း၊ စင်္ကာပူဟာ မတူပေမဲ့ တူတာတွေရှိတယ်၊ ငါတို့ဟာမြန်မာတွေ၊ အလုပ်သွားလုပ်ကြတာပဲ မဟုတ်လား၊’
‘နောက်မှ အေးအေးဆေးဆေး ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ကြတာပေါ့၊ ခုနင် အေးနေပြီ ပြန်ကြရအောင်၊’
ရဲလင်းအောင်က ပြောရင်း သူ့အနွေး အင်္ကျီ ကို ကျမကိုခြုံပေးသည်၊
ဘုရားပေါ်မှ ဆင်းကာ၊ ရန်ကုန်သို့ကျမတို့ပြန်ခဲ့ကြသည်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကျမ အသေအချာ စဉ်းစားသည်၊ ရဲလင်းအောင်က အသစ်ပြန်စချင်သည်၊
လောလောဆယ်ကို ကျေနပ်မူ့ မရှိလို့နေမှာဟု တွေးမိရင်း၊ ကျမ ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ်ပြန်လည်သုံးသပ် ကြည့်မိသည်၊ ဘယ်လိုမှ မထင်မှတ်တာတွေ ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ချစ်သူနှစ်ဦး အတူနေရရင် ပျော်ရွင်ဖွယ်ဟုထင်မှတ်ခဲ့သည်၊ တကယ်တန်း လောကကြီးကို ရင်ဆိုင်ရသောအခါ မလွယ်ကူ့ခဲ့၊ ငါ့ဘဝပေးကံ ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာကို ဘာလို့ကိုယ့်ချစ်သူကို ခံစားစေသလဲ၊ ငါခံစားသလို မဟုတ်တောင် တမျိုးတော့ ခံစားရမှာသေချာသည်၊ ရဲလင်းအောင်က အလျှော့ပေးခဲ့တာပဲ၊ မဟုတ်ဘူး ငါအဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါဘူး ဆိုတာ သူဇွတ်လုပ်ခဲ့တာပဲ၊ ကျမ အတွေးတွေ လည်နေသည်။
မေမေကတော့ ပြောသည်၊ လင်မယားဖြစ်သွားပြီသမီး၊ လင်မယားလိုစဉ်းစား တွေးခေါ်၊ နှစ်ဘက်မျှတွေး၊ အေးအတူပူအမျှပေါ့တဲ့၊ အင်း အေးအတူပူအမျှဖြစ်ခဲ့ရဲ့ လား၊ ငါတို့ကချစ်သူဘဝကနေ လင်မယားဖြစ်ခဲ့တာ၊ တစ်ချို့တွေဆို မိဘပေးစားလို့ ၊ အောင်သွယ်ပေးလို့ လင်မယားဖြစ်ခဲ့ကြတာ၊ တစ်ကယ်တော့ သူစိမ်းတွေပဲ၊
သူ့အကြောင်း ကိုယ်မသိ၊ ကိုုယ့်အကြောင်း သူမသိ၊ ဒီလိုနဲ့အဆင်ပြေနေကြတာများသား၊ ငါတို့လဲ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
အဲဒီလို အကြာကြီး စဉ်းစားပြီးနောက် ကျမ ရဲလင်းအောင်ကို နားလည်အောင် ကြိုးစားသည်၊ ရဲလင်းအောင်ဘက်က ပြန်တွေး ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ရဲလင်းအောင် ပေါ်ကျမအချစ်တွေ သေဆုံးခဲ့ပြီလား၊ ဒါမှမဟုတ် အချစ်ကျောက်ရုပ်ဖြစ်နေပြီလား၊ သေချာတာက ရဲလင်းအောင် ကျမအပေါ်နားမလည်၊ သူချစ်တာကို ကျမ မခံစားရ၊ ကျမအချစ်တွေ ပြန်လည်နိူးထ လာအောင် သူလုပ်ပေးရမည် မဟုတ်ပါလား၊ ကျမပဲ နားလည်ပေးလိုက်ပါသည်။
အဆင်ပြေသည်ဟု ဆိုရမလား ကျမတို့ နှစ်ယောက် အခန်းခွဲအိပ်သည်မှ လွဲလို့ တိုင်တိုင်ပင်ပင် ရှိလာသည်၊ ဒီကြားထဲ သာထက် အကူအညီနဲ့ ရဲလင်းအောင်ကို စင်္ကာပူက ဖုန်းနှင့် အင်တာဗျုးကြသည်။
ရဲလင်းအောင် စင်္ကာပူသွားမည့် ကိစ္စ ဖေဖေမေမေတို့နှင့် တိုင်ပင်ကြည့်ရာ၊ ‘လိုက်သွားသမီး နေရာသစ်မှာ သမီးပိုပြီး အဆင်ပြေသွားမှာပါ၊’ ဖေဖေကဆိုရင် ‘သမီးပျော်မယ်လို့ဖေဖေလုံးဝ ယုံကြည်တယ်၊ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဖေဖေရောမေမေရော ချက်ချင်းထလိုက်လာမယ်၊’ ‘လိုက်သွားသမီး လင်နှင့်မယား ဆိုတာ အတူရှိတာ အကောင်းဆုံးပဲ’ ။
သြော် လင်နှင့်မယား ဆိုတော့
ရဲလင်းရေ ငါလိုက်ခဲ့မယ်၊ နင်ဘက်က သေချာပါစေ စီစဉ်လိုက်တော့။ ။
နောက်မှ သိရသည်မှာ၊ ကျမစိတ်ဖိစီးမူ့ သက်သာရစေရန် အတွက် ကျမမိဘတွေ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ကာ နေရာသစ်သို့ သွားစေခြင်းဖြစ်သည်၊ ရဲလင်းအောင်ကြောင့်မဟုတ်ချေ၊ ကျမကတော့ မျက်ရည်တိုက်ခန်းလေးနဲ့ ဝေးခဲ့ရသည်၊ အပြောင်းအလဲတွေပေါ့၊ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျမဆရာဝန်များကို အယုံအကြည် သိပ်မရှိတော့ပေ။
You couldn't understand,
even if you tried,
the reason that she cries at night,
the reason she tries to hide.
Don't try to come close,
she'll just push you away,
there's something that you don't know,
words she couldn't say.
She tries with all her might,
to be herself around her loves,
but something doesn't feel right,
a sad heart that could not mend.
She pretends that she's strong,
a tough outer shell,
but there's always something wrong,
she's trapped in her Hell.
She wants to speak,
to tell you all the truth,
but she is way too weak,
broken without any glue.
the bird that couldn't fly.
Dying on the inside;
a body withoutamind.
Maybe if you took the time,
find the person she tries to be.
Maybe if you looked inside,
you'd realize she is me.
အဖြစ်အပျက်၊ နာမည်များ တိုက်ဆိုင်ခဲ့သော် တိုက်ဆိုင်မူ့သာဖြစ်ပါသည်။
Rebecca ၏ ကဗျာ
Posted by sosegado at 3/19/2010 09:07:00 PM
ဖတ်ကောင်းမှ ရပ်ထားပြန်ပြီ စင်ကာပူမှာ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လည်း သိချင်နေတယ်.. ကျေးဇူးနော်
တည်တည် ငြိမ်ငြိမ် အေးအေး ဆေးဆေး
ဖတ်ကောင်းရင် ဒီလိုကြီးပဲ တခါထဲ အပြီး ရေးစမ်းပါဗျာ
ဟိုလူနဲ့များ စင်ကာပူမှာ ပြန်ဆုံမလားမသိဘူးနော်။
အဟဲ.......ဆက်မဖတ်ရတော့ အားမလိုအားမရ ဆက်တွေးသွားတာ........
ဇာတ်ရှိန်မြှင့်လာရင် ပိုပြီး ဖတ်ချင်လာပေပဲ
ဋ္ဌကိုက်တယ်ဗျာ-ပထမ ဒုတိယ တတိယ ကိုအတွဲလိုက်
ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတွေကိုရေးဖွဲ့ ထားတာမို့ ဋ္ဌကိုက်တယ်
မျှော်နေတယ်ဗျာ- - -
ဖတ်လို့တအားကောင်းတာပဲ..။ ဘာဖြစ်မလဲ ဘာဖြစ်မလဲနဲ့... စွဲသွားတာပဲ။
အခန်းဆက် မြန်မြန်ရေးပေးပါ ။
Singapore ရောက်တော့မယ်ပေါ့၊ စိတ်ဝင်စားလာပြီး စောင့်ဖတ်ရအုံးမှာပေါ့
ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာထက် ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို ကျွန်တော်သေသေချာချာ ဖတ်သွားပါတယ်။ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ စောင့်ဖတ်ရမှာပဲ။
တစုတဝေးထဲ ဖတ်ချင်တယ်၊ ဆက်ပါဦး၊
လူတွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတတ်တဲ့ အတ္တရဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ခွင့်ရလိုက်သလိုပါဘဲ..
လူတွေရဲ့ အတ္တဥခွံထဲမှာ အခုလို စိတ်ဒဏ်ရာတွေဟာ
အနည်းနဲ့ အများတော့ ကိန်းအောင်းနေတတ်ပါတယ်..
တစ်ခုခုနဲ့ တိုက်ဆိုင်မှသာ ပေါ်ပေါက်လာတတ်တာမျိုးပါ..
ဒါလေးကို ရှင်းလင်းမြင်သာအောင် ရေးဖွဲ့ထားတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်..
ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်..
It's very good writing style of interesting story.
Could you please part 1 and part2at the bottom of part3for those who just start with part 3. Some people might haveahard time finding the other parts. Thank you!
ဖတ်လို့ကောင်းတယ် ဆက်ရန်ရေးရင် ပြောပါအုံးနော် စာရေးဆရာထက်ပိုကောင်းတယ်. . . :P
စာတွေ အကုန်ဖတ်ပြီးတော့ သုံးသပ်မိတာကတော့ 
တိုက်ခန်နာမည် က မျက်ရည်တိုက်ခန်းလို့ နာမည်ပေးတာကို စိတ်ထဲက အစတည်းကမကြိုက်မိဖူး လေ နောက် ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း စိတ်မကောင်းစရာတွေပါလာတော့ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဇတ်သိမ်းခန်းကောင်းစေချင်ပါတယ် ကောင်းပါစေလို့ တောင်းဆုပြုပါတယ် လောကမှာလူတိုင်းကို သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝလေးကိုပိုင်စေချင်မိတယ်လေ။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကျင့်စရိုက်ချင်း မတူညီရင် နားလည်ခွင့်လွတ်မှုဆိုတာ တော်တော်လို အပ်တယ်။ အချိန်တွေကြာလာရင်တော့ သံယောဇဉ် ဆိုတာက စကားပြောသွားမှာပါ...။
သင်ကြန်မတိုင်ခင် ဇာတိရွာလေးဆီ ပြန်ရတော့မှာ ...နောက်ဆက်မဲ့အပိုင်းလေး အမှီဖတ်ရရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲနော်
ဇာတ်ထုတ် ဆက်လက်ထုတ်ပေးဦးဗျို့ .. ကျေးဇူး...
ထပ်ရောက်ခဲပါတယ်နော်.. စိတ်ကူးထဲကလူ အကြောင်း ပြောပြချင်လို့.. လာဖတ်လှည့်ဦးဝှေ့...။
မတွေ့ တော့လည်း - - - -
အပိုင်း ၃လည်း ဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့ ၄ ပိုင်းလုံး ဖတ်ပြီးသွားပြီ။ အပိုင်း ၅ ကို မျှော်ပြီဗျိုးး